Burmese taste - Iora: ဘာတွေဖစ်နေတာလဲ
ဘာတွေဖြစ်နေတာလည်း အုိုင်အိုရာလည်းမသိတော့ပါ။ တခါတခါ ဘလော့ဂင်းခြင်းအမှုကို စိတ်ပျက်မိတာတော့အမှန်ပါ။ ကြည့်လေ မနေ့ ညက ကွန်နက်ရှင်းမကောင်းတဲ့နေရာမှာဘဲ ကွန်ပြူတာကိုသုံးချင်တယ်။ တခြားကောင်းတဲ့နားကို မရွှေ့ ချင်ဘူး။ ပေကပ်ပြီး မကောင်းတကောင်းမှာ ကွန်မန့် လေးတွေ ဖတ်လိုက်၊ ဟုိုအိမ်လည်လိုက် ဒီအိမ်လည်လိုက် နဲ့ လုပ်နေခဲ့တယ်။
တော်တော်လေးကြာတော့ ဖွင့်ထားတဲ့ကိုယ့်အိမ်ကုိုယ်ပြန်လာတော့ ဆာဗာနော့ဖေါင်း နဲ့ တွေ့ ရော။ ဒါပေမဲ့ပေကပ်ပြီး အဲဒီမကောင်းတဲ့နေရာမှာဘဲဆက်ပြီး ကွန်ပြူတာကိုဘဲ ဒေါင့်အမျိုးမျိုးလှည့်ချိန်တယ်။ ဘယ်ရမလဲ။ အုိုင်အိုရာဘဲ။ ရရောလား။ ဟင့်အင်း။ ရပါဘူး။ အရှုံးပေးပြီး ပြောင်းထုိုင်လိုက်ရတယ်။
ကဲ လာလေရော့ဟယ် မမအိုင်အိုရာ။ ကလစ်။ ဟမ်.. This site has been removed.. ဆုိုပါလား။ မနေ့ ကဘဲ ပို့ စ်အသစ်တင်ထားလို့ ပေါ်နေတာ အပ်ဒိတ် မလုပ်လို့ တော့မဖြစ်နုိုင်ဘူး။ ဘာကြောင့်လဲ။ စဉ်းစားကြည့်တယ်။ ငါဘာနှိပ်မိလို့ လဲ။ ဘာမှလည်း အသစ်အဆန်း မနှိပ်ပါဘူး။ စတက် ကိုကြည့်တယ်။ ဘယ်သူတွေ ဘယ်နုိုင်ငံကလာလည်ကြသလဲ ခဏကြည့်တယ်။ ဘာမှကို ထူးထူးခြားခြားမလုပ်ဘူး။ မလုပ်ဆုို လုပ်လည်းမလုပ်တတ်ဘဲကုိုး။ This site has been removed..ရဲ့ အောက်နားမှာ I can't find my website....ဆုိုတဲ့စာသားလေးကို တွေ့ တော့ နှိပ်ကြည့်တော့ တခုခု အမှားအယွင်းဖြစ်နေတယ် တဲ့။ ဒီ ဆိုဒ် မှာ လုပ်ရုိုးလုပ်စဉ်မရှိတာတခုခုတွေ့ နေလို့ ဆုိုဒ်ရဲ့ လုံခြုံရေး ရှေးရှုပြီး လှုပ်ရှားမှုတွေကုိုယာယီ ပိတ်ထားတယ်တဲ့။ မိမိရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ပေးပါတဲ့။ လုိုင်းဖုန်း သို့ မဟုတ် မုိုဘုိုင်းဖုန်း ။ ဗွိုက်စ်မေးလ် သို့ မဟုတ် တက်စ်မက်ဆေ့ဂ်ျ ရွေးပါတဲ့ ။ ဒါမှသာလျှင် Google က verification code ပြန်ပို့ ပေးမယ်။ အဲဒီ code ကုို ပြန်ရုိုက်ထဲ့မှ ကျမ ဆုိုဒ်ကို ပြန်အသုံးချနုိုင်ပါမယ်တဲ့။ အင်း ဂူဂယ်လ်ကဆိုပေမဲ့ ဟက်ကာတွေ အွန်လိုင်းက နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ကုိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်တွေ လိမ်ညာပြီးတောင်းနေတာတွေ နေ့ တဒူဝ ဖတ်ကြားမြင်တွေ့ နေရတော့ မသက်မသာဖြစ်မိတယ်။ ဂူဂယ်အစစ်အတုလည်း ကိုယ်ကဘယ်လိုခွဲမလဲ။ မခွဲတတ်ဘူးလေ။ ဖုန်းနံပါတ်လည်း အင်တာနက်မှာ မထဲ့ချင်ဘူး။ ဒါနဲ့ နှစ်ခါလောက် အဲဒီလိုဘဲတွေ့ နေတော့ ပစ်ထားလိုက်မယ်ခဏလို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ အရင်တခါ ဘာဖြစ်မှန်းတော့မမှတ်မိတော့ဘူး။ အဲလို တောင်းတော့ မလုပ်ဘဲ ဒီတိုင်းထားလုိုက်တာ နောက်နေ့ ကျတော့ ပြန်ကောင်းသွားရော။ ဒါနဲ့ ချစ်ချစ်ကို လှဲ့ ပြီး အီစကို့ ဘလော့လေးဖွင့်လို့ မရတော့ဘူး။ ပျက်သွားပြီလား။ ပိတ်လိုက်ပြီလားမသိဘူး ဆုိုပြီး စိတ်မကောင်းတဲ့ လေသံနဲ့ ပြောတော့ ကုိုကိုက စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပုံ နဲ့ ဘက်အပ် လုပ်မထားဘူးလားတဲ့။ ဟင့်အင်းဆုိုတော့ အကြံအုိုက်သွားပုံနဲ့ အကြံကောင်းပေးပါတယ်။ အိပ်တော့ အိပ်တော့တဲ့။ .......ဒါနဲ့ ဘဲ ဒင်း(ဘလော့)ကို စိတ်နာသလိုလို စိတ်မကောင်းသလိုလုို (အလကားရလို့ သုံးနေတာ ဘယ်သူ့ သွားအပြစ်တင်မလဲ ကဲ။) ပစ်ထားလိုက်ပြီး အိပ်ယာဝင်လိုက်ပါတယ်။
သေချာတာပေါ့။ နုိုးနုိုးချင်း ကွန်ပြူတာအရင်သွားဖွင့်ကြည့်တာပေါ့။ ရရောလား။ ဟင့်အင်း ရပါဘူး။ ဟူး...။ အလကားရတာတွေများ ပိုက်ဆံပေးရတဲ့ဟာတွေလိုဘဲ တယ်ဆုိုးပါလား။
ကဲ..ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် မောင်ဘချစ်။ တတ်နုိုင်ဘူး။ ဖုန်းနံပါတ်ပေးရတော့မှာဘဲ။ ချစ်ချစ် ဖုန်းနံပါတ်ပေးလိုက်ပြီး တက်စ်ကို ရွေးလိုက်တယ်။ ဟိ။ ကလင်ဆုိုပြီး ချက်ချင်းဝင်လာတယ်။ နံပါတ်။ ဒါနဲ့ နံပါတ်ရုိုက်ထဲ့တာ။ အရေးထဲရုိုက်ထဲ့တာ ကဖုန်းကုမ္ဗဏီရဲ့ မက်ဆေ့ နံပါတ် အရှည်ကြီးမှားရုိုက်နေလို့ အင်ဗေးလစ်လုို့ ပေါ်လာပြန်ရော။ အောက်ဆက်ဆွဲဖတ်ကြည့်မှ ကုတ်နံပါတ်က အဲလောက်မရှည်ဘူး ရုိုက်ထဲ့လုိုက်တယ်။ ရပါပြီ။ ပြန်ဖွင့်ကြည့်တော့ အားလုံးကောင်းပါသည်ခင်ဗျားဖြစ်သွားပြီ။ တွေ့ တယ်မှုတ်လား။ အိုင်အိုရာဘဲ။ ငါကွ ဘာရမလဲ။ တကယ်ကိုတော်တော်ပျော်သွားမိတယ်။ ဒါလဲ ပြောမယ်ဆုိုရင် တဏှာ ခေါ်မလား။ ကုိုယ့်ဘလော့လေးကို စွဲလန်းနေတာလေ။
မဖြစ်သေးရင်တော့ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အီးမေးလ်မှာလည်း သူငယ်ချင်းတွေ ဟက်လုပ်ခံထားရတာတွေ တွေ့ ထားတော့ ပါဆင်နယ်အင်ဖော်မေးရှင်းတွေဆုို အင်တာနက်မှာ မတင်ချင်ဘူး။ ရုံးက အီးမေးလ်တွေတောင် ဟက်လုပ်ခံခဲ့ရလို့ ပါ့စ်ဝါ့ဒ်တွေ ခဏခဏပြောင်းခဲ့ရတယ်။ အိုင်တီအဖွဲ့ လည်း ပရုိုတက်ရှင်းတွေ လုပ်တာဘဲ။ ဒါတောင် တော်တော်ကြာကြာ မေးလ်တွေဝင်နေခဲ့တယ်။ အထူးသဖြင့် ကုိုယ့်အကောင့်ရဲ့ လုံခြုံရေးအတွက်ဆုိုပြီး အိုင်တီကနေ တောင်းတဲ့ပုံစံမျိူးနဲ့ အတုမေးလ်တွေ ၀င်လာတာ။ တခါတခါ အတုအစစ်တောင် မခွဲနုိုင်တော့လို့ အိုင်တီကို ပြန်ပြန်မေးယူခဲ့ရတယ်။ သူတုို့ ကိုယ်တုိုင် အတည်ပြုမှ ပြန်ဖြေရဲတော့တယ်။ FedEx Account အတုလုပ်ပြီး ရုံးက ပုိုက်ဆံတောင်းနေတာ တော်တော်ကြာပါသွားပြီးမှ သတိထားမိပြီး သိတော့တာ။ FedEx နဲ့ ပြန်ပူးပေါင်းပြီး သေသေချာချာ ပြန်လုပ်ကြရတယ်။ အိုင်အိုရာ့ စီလည်း ဘဏ်နဲ့ ပတ်သက်တာတွေ၊ ပါဆင်နယ်အင်ဖော်မေးရှင်းနဲ့ ပတ်သက်တာတွေ၊ စီးပွါးရေးနဲ့ ပတ်သက်တာတွေ မေးလ်တွေ မေးလ်တွေ ၀င်လာလုိုက်တာ။ ပါ့စ်ဝါ့ဒ်သာပြောင်းတာ လိပ်စာမပြောင်းတော့ ဆက်လာနေတာလေ။
ပြီးတော့ အင်တာနက်နဲ့ ဆက်ထားတဲ့ ဖုန်းတွေဆိုလည်း privacy မရှိတာတွေ ဖတ်နေကြားနေရတော့ ဘာရယ်မဟုတ် သတိထားနေမိတာပါ။ ဘာမှတော့ထဲထဲဝင်ဝင်နားမလည်ပါဘူး။ အမေရိကန်မှာ အင်တာနက်လူဆုိုးတွေကတော့ အရမ်းများပါတယ်။ အင်တာနက် ကနေ ချက်တင်းလုပ်ရာက လူသတ်မှုဖြစ်တာတွေ၊ မုဒိန်းမှုဖြစ်တာတွေ၊ ပြန်ပေးဆွဲခံရတာတွေ အမြဲတီဗီမှာတွေ့ နေရတော့ သတိထားတဲ့သဘောပါဘဲ။ ဖေ့ဘွတ်မှာ သူငယ်ချင်းဟောင်းဆုိုပြီး ပြန်ဆက်သွယ်လာလို့ ဆက်သွယ်ကြရာကနေ အိမ်ဖေါက်ထွင်းခံရတာတွေ။ ခရီးထွက်မဲ့အကြောင်း ဖဘမှာတင်လိုက်ရာ ကနေ အဲဒီနေ့ မှာ အိမ်ကိုစိတ်တုိုင်းကျ ဖေါက်ခဲ့ကြတာ။ ဒါပေမဲ့အိမ်ရှင်က လျှို့ ဝှက်ဗီဒီယိုကင်မရာ တပ်ထားလို့ သူတုို့ ကို ဖမ်းမိတာ။ အိမ်ရှင်လည်း နှစ်ပေါင်းများစွာကွဲနေတဲ့ ကျောင်းတုန်းက အသိဆုိုပြီး ဖရင်းဒ်လက်ခံခဲ့တာတဲ့။ သူ့ ကျောင်းနေဖက် ကသူ့ အိမ်ကုိုဖေါက်တာမှ စိမ်ပြေနပြေ စားလိုက်သောက်လုိုက်နဲ့ ဖေါက်နေတာ။ သူပြန်တွေ့ တော့ သူလည်း တော်တော်ရှော့ခ်ဖြစ်သွားတယ်။ ကျမလည်း တီဗီမှာအဲဒါကြည့်ရတော့ ဖဘကို တော်တော်လန့် တယ်။ (ချမ်းသာတာကိုး........)
ကဲ..လုိုရင်းပြန်သွားရအောင်ပါ။ ဒီလိုဘဲ လက်နောက်လူကလုိုက်နေတာ။ ဘရိတ်အုပ်နေရတယ်။
ဘလော့ပြန်ဖွင့်လုို့ ရတော့ ယုယုယယလေးပြန်ပြီး အကုန်လိုက်ကြည့်မိတော့ followers အောက်က ပုံလေးတွေကြားမှာ အထက်ကလိုပန်းဝါ၀ါလေး၂ပွင့်တွေ့ မိတော့ ဟင် ငါ့ လုိုဂုိုနဲ့ တူလှပါလားဆုိုပြီး ကလစ်လုိုက်တော့ Iora ပါတဲ့။ ဘယ့်နှယ် အိုင်အိုရာက အိုင်အိုရာကို ပြန်ဖေါ်လိုးလုပ်နေရတာပါလိမ့်။ အိုင်အိုရာ ဘာလုပ်လုပ် အိုင်အိုရာက သိရအောင်လို့ နဲ့ တူတယ်။ ဒုက္ခပါဘဲ။ သူများတွေမြင်ရင်တော့ အုိုင်အိုရာကို ပေါလှပါလားနဲ့ ထင်တော့မှာဘဲပေါ့။ (ဘယ်သူမှ ကိုယ့်ကုိုကိုယ် ဖေါ်လိုးလုပ်တာတော့ မတွေ့ ဘူးဘူးထင်တာဘဲ။တကယ်လို့ ရှိခဲ့ရင်တော့ ဘယ်သူ့ ကိုမှ မရည်ရွယ်ပါဘူးရှင်။ ကိုယ့်ကိုကုိုယ်သာရည်ရွယ်ပါတယ်။ အင်တာနက်လောက စကားမှားလို့ မဖြစ်။ ) ဒါနဲ့ ပြန်ဖျက်ဘုို့ ကို တော်တော်လိုက်ဖတ်လိုက်ရပြန်ပါသေးတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးလေးနာရီလောက်ကမှ အောင်မြင်စွာနဲ့ ပြန်ဖျက်လုို့ ရသွားပါတယ်။ သိပ်လည်း မကလိရဲဘူး မနေ့ ကလို ပျောက်သွားမှာလည်းကြောက်ရသေးတယ်လေ။
ဒါကြောင့်မုို့ လို့ ပြောတာ...............................ဘာတွေဖစ်နေတာလဲ.......လို့ ..
ဘာတွေဖစ်(fit အသံနှင့်ဖတ်) နေမှန်း လည်းမသိတော့ပါဘူး အရပ်ကတုို့ ရယ်။
Posted by Iora at 1:43 AM
rose December 17, 2011 at 2:22 AM
အစ်မအိုင်အိုရာ... ရို့စ်တော့လေ ဒီဘလော့ဂ်အတွက် Sign in လုပ်ပြီး သုံးတဲ့ gmail ကို သေချာ password ကို ခက်ခက်ထားတယ်၊ နောက်ပြီး ဖုန်းနဲ့ Verification code ကိုလည်း ခံထားတယ်။ သူများတွေ hack လုပ်လို့ မလွယ်ကူအောင်။ Gmail Setting မှာ 2-step verification ဆိုတာနဲ့ ပိုစိတ်ချရအောင် ပြင်လို့ရတယ်။ ဖုန်းထဲကို code ပို့တာက လွဲလို့ ဘာမှ သူတို့ မပို့ပါဘူး။
သြော်... ဒါဆို အစ်မကို နာမည်တူနဲ့ လိုက်နှောက်ယှက်နေတာများလား။ ဘလော့ဂ်ဂါတိုင်း အဲ့ဒီလို အနှောက်အယှက်တွေက မကင်းပါဘူး အစ်မရေ..။ စိတ်မပျက်၊ အားမငယ်နဲ့နော်။ ပို့စ်တွေ ဆက်ရေး၊ ရို့စ်တို့တွေ ရှိနေပါတယ်။
(P.S ရို့စ်လည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် Follow ပြန်လုပ်ထားတယ်.. သိလား အစ်မ။ ပြီးတော့ ပေါတောတောနဲ့ အဲ့ကောင်မလေးက ခိး)။ စိတ်ရှုပ်နေတဲ့ အစ်မကို ပျော်အောင် နောက်သွားသည်)
ကောင်းမွန်ဝင်း December 17, 2011 at 4:43 AM
ညယံ December 17, 2011 at 4:57 AM
စိတ်မရှုပ်ပါနဲ့ ကွယ် .. အွန်လိုင်းမှာတော့ တစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးက မရိုးရဘူးရယ် ...
ဖဘမှာ ခရီးသွားမယ့်အကြောင်း တင်မိလို့ အိမ်ဖောက်ခံရတာ ဖတ်မိတည်းက ကိုယ်လည်းမရှိမဲ့ ရှိမဲ့ကို ဥစ္စာချောက်ဖူးသေးတယ်။ အဲဒီတုန်းက မှတ်မှတ်ရရ ပီနန်းသွားခါနီးပေါ့ ။ အိတ်ကြီးနဲ့ ခရီးသွားတာသိပြီး ဘေးအိမ်တွေက ဝင်ဖောက်ခဲ့သော်ဆိုပြီး သော့ခလောက် အကြီးကြီး နှစ်လုံးခတ်ဖူးသေးတယ်။ ပြန်တွေးကြည့်ရင် ရီစရာ..ကိုယ်က ချမ်းသာတာကျလို့ ရယ်။ မှားဝင်မိတဲ့ သူခိုးလက်မှိုင်ချပြီး ပြန်ရမှာ ။ :))))
အပြုံးပန်း December 17, 2011 at 6:17 AM
အင်း၊ အွန်လိုင်း ဗိုင်းရပ်စ်တွေကတော့ အစုံပါပဲ၊
ကိုယ်ကတော့ ရေးချင်တာတွေကိုတော့ ရေးမိနေတုန်းပါပဲ။
မြတ်ကြည် December 17, 2011 at 8:14 AM
မမရယ် ဖြစ်ရမယ်။ ညီမ ပုံမှန်ဝင်ကြည့်နေတော့၊ ရနေတာပဲ။ အဲလိုပဲ တခါတခါ အင်တာနက်က ကြောင်တယ်။ :)
မီးမီးငယ် December 17, 2011 at 3:20 PM
ဒီနေ့ ဖုံးနံပါတ်တောင်းခံရလို့ ပေးလိုက်ပြီ။
Nyi Linn Thit December 17, 2011 at 5:24 PM
ဟုတ်တယ်ဗျ၊ အခုနောက်ပိုင်း ဂူးဂဲလ်က ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ Verification လုပ်လာတာ သတိထားမိတယ်၊ ကျနော်လည်း အဲဒီလို အမေးခံရရင် အတော်လေး ချီတုံချတုံ ဖြစ်မိမှာပဲ၊ အခုကော.. ဘလော့ဂ်ကို back up လုပ်ထားလိုက် ပြီလား?း)
Iora December 17, 2011 at 7:07 PM
အရင်ဆုံးကိုယ့်အသုံးအတွက်တောင်းပန်ပါတယ်။ တကယ်ကိုမမြင်မိလို့ ပါ။ အဲဒီစာကြောင်းအချိန်ရရင် ပြင်လိုက်ပါမယ်။ ပေါတာချင်းတူတောင် ခလေးပေါတာချစ်စရာ လူကြီးပေါတာဟားစရာဖြစ်နေမှာ သိလား။ ဟီးဟီး
တိုးတက်လွန်းလို့ ကြောက်ရတာတွေကတော့တကယ်များတာ။ ဘဏ်ကပိုက်ဆံလည်း အတုလုပ်ပြီးထုတ်ခံရဘူးတယ်လေ။ သူငယ်ချင်းနံမယ်နဲ့ လည်း ငွေချေးခံရတယ်။ မပီပြင်တော့ အတုမှန်းရိပ်မိလို့ သာ။ ပီပြင်ရင်ပို့ မိမလားဘဲ။
တွေးကြည့်တော့လည်း ဟုတ်တယ်။ အိမ်ထဲဝင်ခုိုးရင်တော့မက်စရာဘာမှမရှိဘူး။ သူခုိုးကကျိန်ဆဲသွားမှာ။ ဒါပေမဲ့ သတိဆုိုတာကတော့ပိုတယ်မရှိပါဘူးလေနော်။
ကုိုယ်ထင်တာလေ။ အခု မြန်မာပြည်ကလူဆုိုးတွေက ကွန်ပြူတာတုို့ ဘာတုို့ နဲ့ လုပ်စားရလောက်အောင် မကျွမ်းကျင်သေးလို့ နဲ့ တူတယ်။
ဟုတ်တယ်။ သူကလည်းကြောင်တတ်တယ်။ ကိုယ်ကလည်းကြောင်တတ်တာနဲ့ တွေ့ တော့ ရှုပ်ကုန်တာပေါ့..ဟင်းဟင်း..
ပေးသာပေးလိုက်တော့ မီးမီးရေ။ မသကာ ဟက်ခံရရုံပေါ့။ တူတူနွှဲကြတာပေါ့။
တဗီမှာ အင်တာနက်နဲ့ ဖုန်းနံပါတ် ဆက်သွယ်မှုကြောင့် ပရုိုက်ဗေစီ မရှိတာတွေ ခဏခဏကြည့်ရလို့ ဘာရယ်မဟုတ် တွန့် နေတယ်။ အင်တာနက်ထဲရောက်သွားတာမှန်သမျှဖျက်လည်းမပျက်တော့ဘူးလေ။ ကြောက်တယ်။
ဟင့်အင်း လုပ်ရသေးဘူး။ တခါမှတောင်မလုပ်ဖူးဘူး။ လုပ်ရအုန်းမှာပေါ့လေ။
mstint December 17, 2011 at 11:07 PM
Iora ပြောသလို တီတင့်လည်း ရှုပ်ထွေးလှတဲ့ ဒီလောကအကြောင်း
ဖတ်ဘူး ကြုံဘူးတယ်။ ဂျီမေးလ်တစ်ကြိမ် အဟက်ခံရတယ်။
ဒီအချိန်ရောက်မှ 'အင်တာနက်မသုံးနဲ့တော့လို့' ဘယ်သူပြောပြော
နားထောင်မှာမဟုတ်ဘူး သံယောဇဉ်ကအမျှင်တန်းနေပြီလေး)
ဘာတွေဖြစ်ဖြစ် စိတ်မညစ်တော့ပါဘူး Iora ရယ်။
Iora December 18, 2011 at 2:16 PM
အင်တာနက်ကခုတော့ဘ၀ရဲ့ အရေးပါတဲ့အစိတ်အပိုင်းမှာ နေရာယူမှန်းမသိယူ
နေပြီတီတင့်ရေ။ မရှိမကောင်းရှိမကောင်း..သြော်မိန်းမ..မိန်းမ..မဟုတ်တော့ဘူး..သြော်အင်တာနက်..အင်တာနက်..လို့ ပြောရတော့မယ်။ နော်။
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) December 18, 2011 at 10:04 PM
မအိုင်အိုရာက အမှတ်တမဲ့နဲ့ Gmail Setting မှာ 2-step verification လုပ်လိုက်မိလို့ထင်တယ်
ခုနောက်ပိုင်း ဂူဂဲလ်က Gmailရဲ့ လုံခြုံမှုအတွက် အဲဒီ ဆားဗစ် ထပ်ထည့်ပေးထားတယ် ကျွန်မလည်း Gmail ထဲဝင်တိုင်း ဖုန်းနံပါတ်ထဲ verification code ပို့ဖို့ လုပ်ထားတယ်။ code no လေးရောက်လာမှ ဝင်လို့ရတယ်။ အဲဒီလိုလုပ်ထားခြင်းအားဖြင့် ကိုယ့်မေလ်းထဲကို အခြားသူတွေ ဝင်ဖို့ မလွယ်နိုင်တော့ဘူးလို့ ယူဆရတယ်။ ကိုယ့်ဘလော့လေး လုံခြုံစိတ်ချရတာပေါ့နော်။ အဲလိုလုပ်ထားတာ နည်းနည်းကြာပြီ။ ဖုန်းနံပါတ်ရိုက်ထည့်ထားပေမဲ့ ခုချိန်ထိတော့ ဘာအနှောက်အယှက်မှ မလာဖူးဘူး။ ဘာမှ မဖစ်ပါဘူး. စိတ်ချလက်ချနေပါလို့ ..း)
Vista December 19, 2011 at 2:38 AM
အဲဒါဟင်းတွေ မချက်လို့ မှန်မှန်ချက် မှန်မှန်တင်ပေး ဘာမှ မဖြစ်ဘူး ဟိဟိ
Iora December 19, 2011 at 12:52 PM
အဲဒါတော့ကိုယ်မလုပ်မိဘူး။ ဘာဖြစ်လို့ လည်းဆုိုတော့ ဖုန်းနံပါတ်မထဲ့ချင်လို့ အဲဒါမေးပေမဲ့နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်လိုက်ရင် Gmail ကိုဘဲပြန်ရောက်တယ်လေ။ အဲဒီမေးတဲ့နေရာမှာလည်း cancel, back, next, confirm, စသဖြင့်မရှိလို့ ဘ၀င်မကျဘူး။ အဲဒါကြောင့်ကို တမင်မထဲ့တာပါ။ ဘလော့ပျောက်သွားတော့ နောင်ဆက်ပိတ်သွားမှာစိုးလို့ မထဲ့ချင်ထဲ့ချင်နဲ့ ထဲ့လုိုက်ရတာလေ။ ကျေးဇူးဘဲချောရေ။ အားပေးစကားလေးကြောင့်။ ဖစ်တော့လည်း အသိသာကြီးပေါ့နော်။
ခုဘဲခရစ်စမတ် ဆုတောင်းပြီးပြန်လာတာ။း)
ဟင်းတွေက မှန်မှန်ချက်ဖြစ်ပေမဲ့မှန်မှန်မတင်ဖြစ်ဘူးအခုတလောလေ။ မှန်မှန်လာစားမှာလား မှန်မှန်ချက်ပြီးတင်ရင်။ ပြော။ စတာပါ။ လူတွေကကိုယ်အပါအ၀င်အချိန်တွေတော်တော်ရှားလာကြပြီ။